Wiricheya mitambo uye ine shanduko ine simba | Karman® Mawiricheya
Akaremara vanhu uye wiricheya mitambo: sei yavo wiricheya haina kuvamisa kutamba cricket / basketball / tenesi
Kutanga kwazvose, wiricheya mitambo yakatanga kugadzirirwa kusimudzira ruzivo. Izvi zvapfuura mushandirapamwe uyo Akaremara vanhu vane kodzero yekutamba mitambo uye kutora chikamu mumakwikwi.
nhasi wiricheya mitambo ine mukurumbira, uye vanhu vane muviri Akaremara vanogona kutora chikamu.
Mazhinji emitambo yakatorwa kubva kumitambo yekutanga uye iine zvimwe zvinogadziriswa mumitemo nemirau yekugara vatambi vemawiricheya. Pane marudzi akasiyana-siyana of wiricheya mitambo; Mujaho, tenesi, basketball, badminton, bowling, tafura tenisi, hockey, nhabvu, uye baseball.
Uyezve, vanogona kutambwa mukati Chichemo chemaoko kana yemagetsi mavhiripu.
Kazhinji, mitambo iyo zvinoda magetsi mavhiripu shandisa izwi pamberi pezita. Izvi zvaizopatsanura mutambo.
S-ERGO ATX GURUVHURE
Uyezve, mavhiripu ayo anoshandiswa kumitambo akasiyana zvishoma neakajairwa. Izvo zvakagadzirirwa kuve neakakwira kumhanya uye nyore kufambisa.
Uye zvakare, mavhiri ane zvishoma akatsvedza angles ekuwedzera kugadzikana, uye furemu iri yakasimba kuti isimbise zviitiko zvakashata panguva yemitambo.
Uyezve, wiricheya basketball yakatanga kwakatenderedza 1945 senzira yekuvandudza mukati meHondo Yenyika II yenhengo dzebasa muUS.
Uye zvakare, panguva iyoyo, Sir Ludwig Guttmann akagadzira mutambo wakafanana inonzi wheelchair netball pa Mumhara Rehabilitation Hospital muStoke Mandeville, Great Britain.
Nekudaro, mukurumbira wayo wakakura, uye hausi pakati pezvakanyanya wiricheya yakakurumbira mitambo.
Iyo yepamusoro muviri uye kubatana kunofanirwa kuenderana kune kwavo wiricheya sekunge kwaive kuwedzera kwemuviri wavo.
Huwandu hwekuzvipira hwakakwira. Vazhinji vanofanirwa kurovedza kwenguva refu uye zvakaoma. Kuti uite izvi yakawanda yakareba awa ichashandiswa kugadzirisa iyo wiricheya. Munhu wacho anofanira kupa yavo tech timu mhinduro. Izvi zvichikonzera chaiko nguva yekuvandudza pazvinenge zvichidikanwa.
Uyezve, mutambo inoda kubatana, zano, uye vane hunyanzvi wiricheya-kufambisa maneja kune ese ari maviri wiricheya yemawoko nesimba vanoshandisa wiricheya.
Kuchovha ikozvino zvinogoneka kune vanhu vakaremara nekuda kwekugadzirwa kwemabhasikoro emawoko kana emabhasikoro emaoko. Izvo zvinoita semabhasikoro asi kune vakaremara vanhu. Ivo vari chaizvo emakwikwi emabhasikoro.
Aya mabhasikoro emaoko kana mabhasikoro anotendera Akaremara vanhu kutora chikamu mune zvese zvekuvaraidza uye zvemakwikwi kuchovha.
wiricheya hockey ine zvikamu zviviri: a wiricheya yemawoko uye magetsi wiricheya.
Uye zvakare, izvi zvinobvumidza vanhu vane madhigirii akasiyana e kuremara mukana wekutamba hockey. Kunge hockey yenguva dzose. Kune kurwadziwa kukuru.
Uyezve, wiricheya tenesi inenge iri kutambwa nenzira imwecheteyo seyakajairwa tenesi. Mitemo yacho yakafanana.
Musiyano chete ndewekuti vatambi vari kufamba-famba mukati mavo mavhiripu. Yakanga yatanga muma1970 nemurume anonzi Brad Parks.
Uyezve, uyu mutambo wakawana mukurumbira wakawanda pakati pevamwe wiricheya mitambo. It inoda michina yakasarudzika yekutamba seyakajairwa ingave yakaoma kubata.
The Paralympic Mitambo chiitiko chakakura chemitambo yepasi rose yevatambi vane hurema hwepfungwa kana hurema hwepanyama. Izvi zvinosanganisira vanhu vane kufamba kuremara, kudimurwa, kupofomara, kana kuora mitezo.
Uyezve, vatambi vanopfuura zviuru zvina vanotora chikamu mumitambo makumi maviri.
Uye zvakare, mitambo yakawanda inogona kutambwa pane chero magetsi kana Chichemo chemaoko. Pakati pawo pane mujaho, basketball, tafura tenesi, tenisi, bowling, hockey, badminton, nhabvu, uye baseball.
Pamwe nekuve mitambo yemhando yemhando, chinzvimbo chine simba icho Paralympic vatambi vanotora kushandisa mukurumbira wavo uye kuzivikanwa kwavo kuita zvematongerwo enyika. Iyo Paralympic Mitambo mushandirapamwe uyo mutambo padanho repamusoro unofanirwa kuve kufambidzana kuvanhu vese. Chiratidzo chemitambo chakavakirwa paParalympic Values ​​ina: ushingi, kutsunga, kurudziro, uye kuenzana.
Va para-vatambi vane chinzvimbo chiri nani munharaunda, kuchengetedzeka kwakavandudzwa, mikana iri nani yekudzidzisa, uye nyore kuwana basa.
Zvakare, nekuda kweichi uye nekufashukwa kwepasirese kwepasirese, vanogona kubvisa zvinyadzo mukutenderedza hurukuro maererano kuremara.
Uye zvakare, mutauro unoshandiswa panguva yeMitambo yeParalympic unoshandiswa nehanya sezvo uchikanganisa maitiro kuremara.
Vakaremara mitezo vanokwikwidza mumitambo yavo yakasarudzika vanobudirira kureba uye vanozviita nekudada kukuru.
Ivo havanzwe sekunge ivo vari kubva kumashure kwekunyaradza kweOlympics.
Prue Watt anogara achiruramisa vanhu nekumudaidza kuti Olimpiki kwete Paralympian.
"Ndofunga Paralympic vatambi vanofanirwa kutendeka pachiri uye vanomiririra hunhu hwechikwata cheParalympic pane kuratidzwa zvisirizvo se'Olympian, '' anodaro.
“Kudanwa kuti Paralympian kunomiririra chokwadi chekuti kunyangwe takazvarwa tiine kana kuwana kuremara, takunda matambudziko akasarudzika kuburikidza kuchinja. Zvakare wakarwa hondo dzakawanda dzekufunga zvisirizvo kana kufungidzira kusakwanisa akapoteredza kuremara, "
Mukupedzisa, stereotypes uye kutonga kungave kuchiri kunosuruvarisa chikamu che upenyu kune vanhu vanogara ne kuremara.
Mitambo yeParalympic yakaita basa rakakosha mukupokana nepfungwa dzepedyo nezve mutsauko uye yakabatsira kusimudzira kusanganisa panguva yekumisikidza bhenji nyowani yezvinofungidzirwa kuti zvinogoneka.